Kuvasarudza A Laser Tube Cutting Machine For Zvikwepa Processing - China Wuhan Golden Laser
Kuvasarudza A Laser Tube Cutting Machine For Zvikwepa Processing
Laser chubhu nokuveza michina kuita zvinopfuura akatema vakapfeka siyana zvinhu nokubatanidza kwendangariro. Ivowo kubvisa zvinhu handlings uye kuchengetera semifinished zvikamu, vachiita chitoro run zvakanyanya. Zvisinei, izvi hazvina magumo kwayo. Maximizing richadzokera pamusoro mari zvinoreva vanyatsofunga muchitoro kuti kushandiswa, kudzokorora ose iripo muchina zvinhu uye kusarudza, uye haritauri muchina maererano.
Zvakaoma kufungidzira nokuveza-kana kuwana Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri chubhu yacho workpieces dzose, mativi, rectangular, kana asymmetrical mu chimiro-pasina lasers. Laser hurongwa revolutionized chirongwa chubhu nokuveza, kunyanya pamusoro kunzwisisa maumbirwo. muchina kwakadaro kunoda chinokosha kwokutanga mubhizimisi, kunyanya kana uri kushanda pamwe makuru chubhu hukuru uye kutanga kushandisa michina nezvimwe michina mitsva kupinda kugadzirwa muitiro, saka uchafanira vanofanira kuronga nokungwarira nechokwadi kuti Laser chubhu nokuveza ndiyo Mari-kunobudirira wako kambani.
Pakupedzisira, unofanira kufunga variables akawanda asati asarudza kutenga Laser chubhu nokuveza muchina; chigadzirwa design, muitiro anoitwa, mutengo rutapudzo, uye mhinduro nguva ndezvimwe zvezvisarudzo dzinonetsa.
Laser nokuveza anogona vanokweretesa pacharo kuti hutsva chigadzirwa mazano. Innovative uye kuoma mazano zviri nyore kuti muitiro pamwe Laser uye anogona kuita chigadzirwa nesimba uye arambe nemachira unogamuchirwa, kazhinji achidzikisa uremu pasina kubayira simba. Tube lasers dzinogona kutsigira chubhu gungano rikurumidze. Special Laser akagerwa zvinhu inobvumira chubhu Profiles kuva hwakakungwa kana akabatana nyore kunogona kurerutsa Welding uye ungano kwazvo uye rubatsiro kuderedza mutengo chigadzirwa wacho.
A Laser anobvumira opareta nemapako akagerwa uye contours kunyatsoreva mune imwe rwekuita danho, kubvisa akadzokorora chikamu handlings kuti nomurwizi pezvakaitwa (ona Figure 3). Mune imwe chaizvo muenzaniso, vachiita chubhu ine chokuita Laser panzvimbo sawing, azvikuya, kuchera, deburring, uye aishamwaridzana zvinhu pakugadzirisa akaderedza mukugadzira mutengo kubudikidza 30 muzana.
Easy zvirongwa kubva kombiyuta-Ichibatsirwa zvakagadzirwa mufanidzo runoita kuti purogiramu chikamu nokukurumidza nokuda Laser nokuveza, kunyange kana ari maduku-batch mangé kugadzirwa kana prototyping. Kwete chete anogona chubhu Laser muitiro zvikamu nokukurumidza, asi setup nguva yava shoma, saka unogona kuita zvikamu chete-mu-nguva kuderedza uwandu mari.
Kufananidza kuti Machine kune Applications
Apinza uwandu yako nezvekumwe kugadzira tsoka, yako inotevera danho iri kudzokorora iripo zvinhu uye kusarudza kunokosha.
Kucheka Power. Yeuka kuti vakawanda chubhu lasers vari vakapakata resonators kuti anunure 2 KW kusvika 4 KW Wokucheka simba. Izvi zvakakwana kucheka hwokufananidzira kunonyanyisa Ukobvu munyoro simbi Tubing (5/16 padiki) uye hwokufananidzira kunonyanyisa Ukobvu aruminiyamu uye simbi Tubing (¼ mu.) Zvakanaka. Fabricators kuti ironge nouchapupu yakawanda aruminiyamu uye Stainless simbi vachada muchina pamatunhu kuguma simba siyana, asi makambani kuti basa nechiedza-geji nyoro simbi anogona kunge nayo imwe yakaderera pakuguma.
Our Laser chubhu nokuveza muchina P3080 3000w nokuda sepombi processing mu Australia
Chinzvimbo. The muchina wacho kugona, kazhinji yavose sezvavakatarirwa mu kunonyanyisa uremu pa netsoka, ndechimwe dzinonetsa nezvawo.
Sepombi anouya nenzira dzakasiyana-siyana mwero hukuru, yemanyorero kubva 20 kusvika 30 tsoka uye dzimwe nguva refu. An yepakutanga midziyo mugadziri kana chibvumirano mugadziri zvirevo chubhu iri tsika hukuru kuderedza chinyorwa uye naizvozvo tinofanira kufunga gadzirirwa kuti machisi zvakafanana zvinhu hukuru. Kusarudza anowana zvishoma kupfuura kuoma kuti basa zvitoro. Sepombi kubva chigayo vari yemanyorero 24 ft. Refu kuti diameters anosvika 6. Uye 30 ft. Refu kuti Profiles kusvika 10 iri. Muna dhayamita. In ichi saizi siyana, hwokufananidzira uremu anokwanisa kumicheto Laser gadziriro zvinogona kusvika 27 makirogiramu muzana rutsoka Linear.
Material Mutoro uye Kudzikisa. Chimwe chinhu muchina pakusarudza kukwanisa kwayo Kufudza mbishi zvinhu. A nezvekumwe Laser muchina, achicheka nezvekumwe nhengo, anomhanyira zvokuti Chinyorwa vachizvitakudza pezvakaitwa haagoni kuramba, saka chubhu Laser nokuveza michina yemanyorero kuuya svinga loader, izvo mitoro muzvisote anosvika 8.000 LBS. mashoko kuva magazini. The loader anotsaura sepombi uye mitoro navo mumwe nomumwe kupinda muchina. The chiputu loader anogona kununura zvinoverengeka mbishi sepombi kuva magazini buffer kuderedza vachizvitakudza nguva pakati sepombi kuti sezvo shoma sezvo mumasekonzi 12. Achitaurazve kubva chubhu Kukura mumwe chinoitwa nyore nevanhu otomatiki mashandiro mukati loader. kugadzirisa zvose zvinodiwa kuti idzva chubhu saizi zvagadziriswa ne controller.
Kana zvakafanira kuti vasavhiringidza hombe kugadzirwa run basa duku, zvichiri kukosha kuti vamwe Chinyorwa mutoro mikana. Mutekenyi anombomira kurimwa run, manually zvinorema uye kurongedza zvibereko kupedza basa duku, ipapo restarts kurimwa run. Ndichiburutsa uyewo panodiwa. The vachidzikisa divi zvokushandisa dzapedza sepombi rinowanzova 10 ft. Refu asi anogona ngazviwedzerwe zvakumbirwa urefu rakapedzwa zvikamu kuti kupatsanurwa.
Musono uye chimiro vasabatwa. Welded sepombi zvinoshandiswa kugadzirwa zvinhu zvikuru kupfuura musono sepombi, uye weld musono anogona kuvhiringidza Laser nokuveza rikurumidze uye zvichida chokupedzisira gungano. A Laser Machine vakagadzirira kuruoko Hardware kazhinji vanogona kuona welded vazvo kubva kunze, asi dzimwe nguva chubhu yacho kumugumo pfungwa dzomutauro wokutanga dzingasajeka ari musono. A chaiwo musono-vachifunga hurongwa anoshandisa maviri makamera uye vaviri chiedza zvinyorwa kutarira kunze uye mukati chubhu okuona weld musono. Mushure zvakaratidzwa hurongwa anoona kuti weld musono, muchina wacho Software uye kudzora mamiriro tenderera ari chubhu kurerutsa weld musono wacho nezvainoita rakapera chigadzirwa.
Most chubhu Laser gadziriro vanogona kucheka kumativi, mativi, uye rectangular Tubing, uyewo Profiles akadai teardrop zvitarisiko, angled simbi, uye C-gwara. Asymmetrical Profiles zvinogona kudenha vapinze uye kiramba zvakanaka, saka imwe optioneel kamera akashongedzerwa uchinyanya chiedza anoongorora chubhu munguva vachizvitakudza rikurumidze uye kuchinja Chuck maererano dzakaonekwa profile. Izvi zvinoita yakavimbika vachizvitakudza uye nokuveza asymmetrical profiles.
Kucheka Head. Bevel nokuveza kunokosha kuti richishanda akavezwa sepombi pamwe Welding. Bevel nokuveza kunoda nokuveza musoro kuti tilts kusvika madhigirii 45 mu kana mirayiridzo panguva nokuveza rikurumidze. Nokuti mamwe kugadzira vakachengeteka mumazuva zvakaoma bevel nokuveza rikurumidze, nokuveza musoro anogona richengetwe ne magnets a. Kana munhu kudhumhana pakati tubular workpiece uye musoro, musoro detaches; inogona reattached mumasekonzi mashomanana. Asiwo zvinobvira nokubatanidza bevel nokuveza musoro ane mamwe matunhu-nokukurumidza akabatana kuti kwakavandudzwa nokuveza kumhanyisa, vachibvumira kuwedzera midziyo negoho kusvika 30 muzana.
Ataura kuti kukosha Laser chubhu nokuveza hurongwa anogona kuuya kugadzirwa muitiro, unofanira kugadzira kuti zvokushandisa chikumbiro chako. Somuenzaniso, hupfupi ari vachizvitakudza ino anogona zvakakomba nechirongwa nesting kunyatsoshanda ose apera zvikamu, izvo anowedzera chinyorwa, apo refu kwegadziriro zvaizoda chepamusoro pakutanga mubhizimisi uye zvakawanda uriri nzvimbo pane rotsvakwa. Kuwedzera achitsvaka mazano kubva ezvinhu vagadziri, unofanira kutema mharidzo kumativi uye kuyera ose anowanika nezvechisarudzo nechokwadi kwako mari kunoguma yakanakisisa inobvira kudzoka.
Pipe Laser Cutter Mune yedu Vatengi Saiti
Fiber Laser Tube Pipe Cutter 3000W P3080 For sepombi Processing In France
Automotic chiputu loader Fiber Laser Pipe Cutting Machine P3080A In USA
Sets Four Pipe Laser Cutter P2060A For Metal Furniture In Korea
Tube Laser Kucheka Machine P2060A Yepombi Kugadziridza MuMexico
Pipe Laser Kucheka Machine P3080 For Pipe Processing In France
Full Cover cnc Professional Pipe Laser Kucheka Machine P2060A In Taiwan
Yakagadzirirwa Fiber Pipe Laser Cutter P2080A MuKorea
P30120 Metal Tube Laser Kucheka Muchina WeSimbi Kuumbwa MuChina
Demo Vhidhiyo On Youtube
Kero: Golden Laser Viwanda Park, Tianxing Rd, Hengdian Street, Chuanlong Ave, Huangpi District, Wuhan, China 430312